Raysal wasaaraha Sweden oo sheegay in aysan yareyn doonin tirada magangalyo doonka | Somaliska
Raysal wasaaraha Sweden Fredrik Reinfeldt ayaa wargeyska Dagens Nyheter u sheegay in aysan dowladiisu ka wada hadlin yareynta tirada soo galootiga, hadalkaas oo qilaaf ku ah midkii uu horay u jeediyay wasiirka Socdaalka Tobias Billström oo si toos ah u sheegay in loo xilsaaray yareynta soo galootiga.
Raysal wasaaraha ayaa sheegay in gudiga uu hogaaminayo Billström loo xilsaaray in ay soo bandhigaan qaabkii si fiican loogu soo dhaweyn lahaa dadka magan galyo doonka ah isla markaana meesha looga saari lahaa dadka Sweden ka soo gala bariga Yurub ee aan xaqa u lahayn in ay Sweden yimaadaan.
Mar la weydiiyay in xisbigiisu uu hayo wadada xisbiga cunsuriga ah ee SD ayuu sheegay in aysan taasi sax ahayn oo aysan xisbiyada kale ku dayan.
Hadalkii wasiirka Socdaalka ayaa waxaa ka soo horjeestay dhamaan xisbiyada kale ee baarlamaanka marka laga reebo SD. Wasiirka isdhexgalka Erik Ullenhag ayaa doraad shir ku saabsan soomaalida ka sheegay in aysan ogolaan doonin xisbigiisu in la adkeeyo mideynta reeraha isagoo sheegay in taasi ay markii horeba qalad weyn ahayd.
Hadalka raysal wasaaraha oo qilaaf ku ah hadalkii wasiirkiisa ayaa u muuqda mid lagu dajinayo xisbiyada kale. Balse siyaasada xisbigiisa Moderaterna ayaa la wada ogyahay in ay tahay sidii loo yareyn lahaa soo galootiga.
Doorashadii oo lagu celinayo
Waad mahadsantahay Sihaam walaal . Kuligeeyn kheer Allah nooga soo qaado . Dadaalaa wuu gaaraa aan sabarno asxaabey calafkeena waa heleeynaa.